Warshadda Sunta, Shirkadaha Alaabada - Shiinaha Soosaarayaasha Sunta
Shiidi steel toogtay
Iska yaree toogta
Silicon Manganese Daawaha
Kubad bir ah oo been abuur ah
Shot ahama ahama Steel
Qaadista birta birta xagasha
Carburisereyaasha (Kaarboon gooyeyaasha)
Carburizer, oo sidoo kale loo yaqaan wakiilka carburizing ama carburant, waa wax lagu daro bir-sameynta ama shubista si loo kordhiyo kaarboonka. Carburizer-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu safeeyo birta Carburizer-ka iyo birta Carburizer-ka, iyo sidoo kale waxyaabo kale oo lagu daro Carburizer, sida waxyaabaha lagu daro bareega, sida maaddada is-qabadsiinta
Daawada 'Ferro silicon barium inoculant' waa nooc ka mid ah daawooyinka ku saleysan FeSi oo ay ku jiraan qadar cayiman oo ah barium iyo kaalshiyam, waxay si la yaab leh u yareyn kartaa astaamaha qabow, iyagoo soo saara haraag aad u yar. Sidaa darteed, Ferro silicon barium inoculant wuxuu ka waxtar badan yahay sunta ku jirta kaliya kaalshiyamka, xayeysiiska
Nodulizer waa mid balwad leh oo dhiirrigelin kara sameynta garaafka 'spheroidal graphite' ee ka kooban qaybaha garaafka ee geeddi-socodka wax soo saarka. Waxay kobcin kartaa garaafyada spheroidal-ka waxayna kordhin kartaa tirada garaafyada spheroidal-ka si aaladooda farsamaysan loo hagaajiyo. Natiijo ahaan, ductility iyo adkaanta
Maaddada loo yaqaan 'Ferro silicon strontium nucleating agent' waa nooc ka mid ah isku-darka FeSi-ku-saleysan oo ay ku jiraan qaddar ka mid ah barium iyo kaalshiyam, waxay si muuqata u yareyn kartaa dhacdooyinka qabow, iyagoo soo saara haraag aad u yar. Sidaa darteed, Ferro silicon barium inoculant wuxuu ka waxtar badan yahay sunta ku jirta kaliya calc
Silicon Calcium Deoxidizer wuxuu ka kooban yahay walxaha silikoon, kaalshiyamka iyo birta, waa deoxidizer kaamil ah, wakiilka baaba'a. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa bir tayo sare leh, bir yar oo kaarboon ah, waxsoosaarka birta aan lahayn iyo nalka hoose ee nickel, daawaha titanium iyo waxsoosaarka kale ee khaaska ah.
Ferro silicon magnesium Nodulizer wuxuu dib u soo saarayaa isku-darka alloy ee ka kooban dhulka dhifka, magnesium, silicon iyo kaalshiyamka. Ferro silicon magnesium nodulizer waa nodulizer aad u fiican oo saameyn xoog leh ku leh deoxidation iyo desulfurization. Ferrosilicon, Ce + La bir mish ama ferrosilicon dhul dhif ah iyo magnesium waa
CINWAANTengzhou City, Gobolka Shandong, Shiinaha
WAQTIGA SHAQADA8:00 subaxnimo-18: 00 pm Isniinta ilaa Sabtida